SEO Buddy: Yako SEO Yekutarisa Uye maGwara Ekuwedzera Yako Organic Chinzvimbo Kuonekwa | Martech Zone
The SEO Yekutarisa neSEO Buddy is yako nzira yemugwagwa kune ese akakosha SEO chiito iwe unofanirwa kutora kukwidziridza yako webhusaiti uye uwane yakawanda organic traffic. Iyi ipakeji yakazara, kusiyana nechinhu chero chandakaona online, zvinoshamisa zvinobatsira kune avhareji bhizinesi kuvabatsira vachiramba vachiwedzera saiti yavo uye kuwedzera kwavo kuoneka pakutsvaga.
Iyo SEO Yekutarisa Inosanganisira
Iyo 102-Point SEO Yekutarisa Google Sheet
Iyo 102-Point SEO Yekutarisa Webhu Kunyorera
Iyo 62 Peji eBook (PDF)
Iyo 52-vhiki yezvinyorwa kuronga kalendari nzira (PDF)
Iyo makumi mashanu-poindi Zvemukati Distribution Yekutarisa
Pamusoro pemakumi mana ematanho ekushandisa maitiro (SOPs) kuti iwe utevere.
Kana iwe uri mutsva kuSEO uye uchinetseka, iyo SEO Ongororo ichakubatsira iwe kunzwisisa iyo hombe pikicha yezvaunofanirwa kuita kukwidzirisa uye nekuisa saiti. Nekushandisa uye maspredishiti, iwe unozogona kuteedzera izvo zvaunazvo uye zvausina kuita kuitira kuti usarasikirwa nechero nzira dzakakosha.
Haisi kungori runyorwa rwemabara mapoti, kana. Iyo yekutarisa inouya iine tsananguro, nhanho-nhanho zvinyorwa kuitira kuti unzwisise chaizvo maitiro ekuita nhanho imwe neimwe.
Ino haisi yekutenga-nguva-imwe, chero! SEO inogara ichichinja saka kana iwe ukatenga iyo SEO Ongororo, iwe unowana kuwana kwehupenyu hwese kusanganisira zvese zvenguva yemberi zvemahara.
Kana iwe uri wakakomba nezveSEO, ichi chinhu chinotyisa sosi. Chandinoda nezvazvo ndiko kujeka kwaunowana. Zvakafanana nekuedza kuita jigsaw puzzle uye kuona iyo mufananidzo kekutanga. Iwe unoziva zvinoda kuitwa.
Louise Green, Anonyoresa
Iyo SEO Yekutarisa Target Nzvimbo
Sezvo injini dzekutsvaga dzashanduka, pane akasiyana tarisiro nzvimbo dzaunofanirwa kutarisa kana iwe uchitarisira kuzadza zvizere organic traffic kune yako saiti kana chitoro:
hwaro - Maitiro ekumisikidza analytics, kuteedzera ako akakosha, uye kuteedzera metric muGoogle Tsvaga Console
Nhoroondo yevashandi - Google ine hanya nezviitiko zvinoshandiswa nemushandisi wekutsvaga pavanomira pane yako saiti, saka unofanirwa kusimudzira chiitiko ichocho.
gutsikana - Kana iwe ukagadzira yakasarudzika zvemukati, vanhu vanozoigovana, mhando dzemasaiti dzinozobatana nazvo, uye Google ichakugadzirira iwe pachazvo.
mutambo - Dzidza maitiro ekugadzira yako saiti nekukurumidza saka zvese zvinotakura nekukurumidza. Google inoda mawebhusaiti anokurumidza.
Pa-Peji SEO - Peji rega rega pane yako saiti rinofanirwa kuve nyore kune injini dzekutsvaga kukambaira kunongedza zvakanaka pamwe nekushandisirwa vashanyi kuti vafambe nayo.
Off-Peji SEO - Gadzira ruzivo rwewebsite yako uye unganidza zvakakwirira-zvakakosha zvinongedzo kuburikidza nekusvikira uye midhiya enhau kutyaira chiremera chako.
Unyanzvi SEO - Dzivisa misungo yakajairika iyo inodzivirira mainjini ekutsvaga kubva mukutsvaga uye kunongedza yako saiti zvakanaka.
Local SEO - Ita kuti nzvimbo dzako dzemunharaunda dzigadziriswe mumainjini ekutsvagisa uye madhairekitori akakosha uko injini mbiri dzekutsvagisa ruzivo rwako uye nekwavanowana vashandisi.
Iyi haisi kosi yepamhepo! Iyo SEO Yekutarisa ndeye mugwagwa uye yekutarisa kune SEO kubudirira nezvose zvirimo zvaunoda kuti uwane yakakwira SEO mhedzisiro!
Shandisa Discount Code MARTECHZONE
Kana iwe uchida 25% kubva pamutengo weSEO Rondedzero, shandisa kodhi MARTECHZONE paunobuda! Iwe zvakare uchawana mamwe mabhonasi ekuwedzera pakubuda.
Tenga Iyo SEO Yekutarisa neSEO Buddy
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we SEO Buddy.
Tags: kodhi kodhigoogle spreadsheetyemuno seooff-saiti seopane-saiti seoorganic yekutsvaga chinzvimbovashandisi veinjini yekutsvagatsvaga mushandisi ruzivoshamwari shamwariiyo yekutarisaseo zvemukati kurongaseo madhairekitoriseo gwaraicho kurongaseo kudzidziswatechnical seo